जलविद्युत आयोजनाले मुआब्ज दिन जग्गाको मूल्य तोक्यो, हेर्नुहोस् कति प¥यो ? « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
जलविद्युत आयोजनाले मुआब्ज दिन जग्गाको मूल्य तोक्यो, हेर्नुहोस् कति प¥यो ?
काठमाण्डौं । वहुप्रतिक्षित अरुण ३ जलविद्युत आयोजना एक कदम अघि बढेको छ। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दालाई मुआब्जा दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाले स्थानीय जग्गाको मूल्य तोकेर प्रकृया एक कदम अघि बढाएको हो।
जग्गा अधिग्रहरण पश्चात मात्र आयोजनाको भौतिक निर्माण अघि बढाउन सकिन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चार गाविसका बिभिन्न वर्गका जग्गा, बालीविरुवा एवं त्यहाँ निर्मित संरचनाको अलग अलग मूल्य तोकेको हो। प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाले ३५ दिन भित्र मुआब्जाका लागि निवेदन दिनु पर्ने समेत जनाइएको छ।
जिल्लाका पाथिभरा, नुम, दिदिङ्ग र याफू गाविसका जनताले प्रभावित क्षेत्रको वासिन्दाको रुपमा मुआब्जा पाउनेछन्। चारै गाविसमा पाखोको मूल्य प्रति रोपनी आठ लाख २५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। खेती लगाउने वारीको मूल्य भने नौ लाख सात हजार पाँच सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
अलैंचीवारीको लागि प्रतिरोपनी १० लाख ४३ हजार पाँच सय रुपैयाँ र खेत १२ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। प्रभावित क्षेत्रको जग्गाले उत्तर दक्षिण कोशी राजमार्ग छोएको भए थप २० प्रतिशत मुआब्जा दिने जनाइएको छ। अलैंचीवारीका लागि भने फल्ने फसलको समेत तीन बर्ष सम्म मुआब्जा दिने सरकारले जनाएको छ। एक रोपनीमा एक मन अलैंची फल्ने मूल्याङ्कन सहित तीन वर्ष सम्म प्रति मन एक लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिन लागेको हो।
त्यस बाहेक अलैंचीवारीको जग्गा विकास खर्च प्रति रोपनी २५ हजार, ढुवानी र रोप्न लाग्ने खर्च २४ हजार रुपैयाँ समेत तीन बर्ष सम्म दिने जनाइएको छ। त्यस बाहेक बिरुवा हेरचाह गर्न भनेर तीन बर्षको लागि एकमुष्ट प्रति रोपनी १० हजार पाँच सय रुपैयाँ दिइनेछ।
घडेरीको मूल्य भने अरु जग्गा भन्दा महङ्गो छ। २०० वर्ग मिटरलाई एउटा घडेरीको रुपमा मुल्याङ्कन गरिनेछ। नुमको फ्याक्सिन्दा दोभानको घडेरी प्रतिगोटा १२ लाख ३७ हजार पाँच सय र त्यहाँ बाहेकको घडेरीलाई प्रतिगोटा ११ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
भौतिक संरचनाको मूल्य दिदङ्ग र याफुमा केहि महङ्गो तोकिएको छ। त्यहाँ घर प्रति वर्ग मिटर सात हजार ८९८ एवं गोठ तथा खोर तथा चर्पी लगायतका अरु संचरना प्रति वर्ग मिटर दुई हजार ३६९ रुपैयाँ तोकिएको छ। नुममा भने यिनै संरचना क्रमशः सात हजार ११३ एवं दुई हजार १३४ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। खेत र वारीका लागि जग्गा विकास खर्च प्रति रोपनी सात हजार ७०५ रुपैयाँ समेत दिने जनाइएको छ।
यस्तै वसाइँसराइ वापत प्रति परिवारले ढुवानी खर्च ६० हजार, घरभाडा तीन महिनाको ३० हजार, श्रमिक खर्च चार हजार ८०० पाउनेछन्। खाद्य सुरक्षा वापत प्रतिव्यक्ति छ महिनाको १३ हजार ६०४ रुपैयाँ समेत दिने जनाइएको छ। संक्रमणकालिन खर्चको रुपमा अलैंचि किसान बाहेक अरुले प्रति रोपनी छ हजार रुपैयाँ र व्यापारीले प्रति पसल छ महिना १५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्।
घरमा संरक्षण गर्ने व्यक्ति नभएका ६० बर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकलाई समेत विषेश भत्ता दिने जनाइएको छ। सरकारले भुक्तानी दिन थालि नसकेका जेष्ठ नागरिकलाई सरकारी दर रेटको दोब्बर र सरकारबाट पाउनेलाई त्यतिनै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने जनाइएको हो।
७ कार्तिक २०७३, ११।००